Twi Archives - Ama Kambon
Adetwerɔ “Skhmkht Ea on Love Sublime”
Wednesday, 24 November 2021 10:38
Adetwerɔ “Skhmkht Ea on Love Sublime” na ɛkasa fa ɔdɔ ho nsɛm a ɛwɔ Kemetman mu ho. Wɔ Kemetman mu, mmaa ne mmarima taa twerɔ anwonsɛm faa ɔdɔ a ɔɔmo wɔ ma wɔn ho no ho. Saa anwonsɛm taa wɔ nsɛmfua nson. Ɔɔmo taa twerɔ faa sɛdeɛ ɔɔmo wɔ “yareɛ” a ɔɔmo nte apɔ kɔsi berɛ a wɔhu wɔn ho. Wɔ saa anwonsɛm yi mu, mmaa ne mmarima dɔfo taa frɛ wɔn ho sɛ ‘onuabaa’ ne ‘onuabarima’.
A ɛwɔ saa adetwerɔ yi ho, yɛsan kasa fa sɛdeɛ Heru, Seteh, Ausar ne Auset ka ɔdɔ ho asɛm wɔ Kemet mu ho. Yɛkasa afa sɛdeɛ Seteh twitwaa Ausar nkyekyɛmu nketewa, na Auset san kaa ne ho bomu, na Heru nso baeɛ. Yɛsan kasa faa sɛdeɛ Kemet ɔdɔ asɛm saa berɛ no, ɛne nnɛ ɔdɔ asɛm no wɔ wiase afa no nyinaa nsɛ, nsonsoneɛ wɔ mu.
Fiada a ɛtwaa mu no, yɛkɔɔ KASI. KASI yɛ baabi a nnipa tumi soɛ, a ɛwɔ baabi a yɛfrɛ no Lati-Wote. Nnansa yi ara na yɛasi KASI awie. Berɛ a yɛkɔɔ hɔ no, mesua faa asa ne nnwom a ɛwɔ hɔ no. Na ɛyɛ anika. Afei nso mepɛ sɛdeɛ a wɔde nnɔteɛ ade si adan no. Mepɛ sɛdeɛ dan no si teɛ nso.
Ɛyɛ komm wɔ hɔ. Na nnua pii twa yɛn ho hyia, afei nso asuo ketewa bi na ɛbɛn baabi a asoɛ dan no wɔ. Oguo kɛseɛ nso bi wɔ hɔ, nanso ɛsɛ sɛ wonante kɔ hɔ. Na ne kwan yɛ wa kakra. Nanso ɛhɔ nyinaa yɛ fɛ.
Saturday, 20 June 2020 21:33
Ɛnnɛ mesua faa nnwom bi ho. Nnwom no na ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛdwene nea yɛbɛyɛ ama yɛn nkyirimma a wɔbɛnya ho mfasoɔ daakye ɛfiri sɛ wɔ nnwom yi mu, obi te sɛ akwakoraa a wɔnyini bebree na ɔdwene ne nkwadaa ne nkyirimma ho na ɔduaa kube. Nti ɛsɛ sɛ yɛn na yɛdwene nea yɛbɛyɛ ama yɛn nkyirimma.